AIRTOX Kabaha badbaadada TX33 | AIRTOX
The Gram kala duwan
The Formula kala duwan
The G-Force kala duwan
The McLaren kala duwan
The Stingray kala duwan
The TransAm kala duwan
Qabow & Aniga®
AIRTOX Kabaha badbaadada TX33
Nabdoonaan buuxda oo leh heer sare oo raaxo leh
Kuwa aadka u horumarsan Airtox qaabka TX33 waxaa lagu gartaa dhowr astaamood oo super ah, sida lakabka kacaanka ee kacaanka-kacaanka: WHITELAYER® - adag sida birta oo jilicsan sida dharka jikada. Iyadoo WHITELAYER®, Airtox waxay abuurtay tikniyoolajiyad dhulka hoosaad u ah oo ka dhigaysa TX33 marka laga reebo kabaha kale ee amniga ee suuqa aad maanta garan karto.
Airtox waxay sidoo kale kor u qaadday maaddada sare ee qaabkan qaab maaddo microfiber cusub oo horumarsan. Qalabkaani wuxuu bixiyaa khafiif, neefsashada iyo sifooyinka biyaha ka celiya. Ku habboonaanta qaabkani waa ka sarreeyaa waana heer gaar u ah. Injineeradayada waxay ku guuleysteen sameynta taangiga ballaaran, isboorti oo kabaha ka dhigaya mid la mid ah galoofiska.
WHITELAYER® oo la socda Airtox Nidaamka AIR-3.0, wuxuu kabaha badbaadada TX33 ka dhigayaa mid jajaban illaa heer sida kaliya lagu yaqaanno xoogaa hindhisada.
TX33 wuxuu ku qalabaysan yahay fududaanta dusha iyo banaanka UTURN® Nidaamka xargaha lacageed.
Waxa lagu heli karaa hal nooc midab: cagaar (midabyo kala duwan oo midab ah eeg TX11, TX22 iyo TX44, ee nooca leh xarkaha kabaha ayaa leh muuqaal TX1, TX2 or TX3, ee nooca kabaha dhexe - eeg TX66).
Kuwa aadka u horumarsan Airtox qaabka TX33 waxaa lagu gartaa dhowr astaamood oo super ah, sida lakabka kacaanka ee kacaanka-kacaanka: WHITELAYER® - adag sida birta oo jilicsan sida dharka jikada. Iyadoo WHITELAYER®, Airtox waxay abuurtay tikniyoolajiyad deg deg ah oo TX33 ka dhigaysa kuwa kale ...
WHITELAYER® lakabka ka-hortagga guska
Uturn® lacing smart
Furuqa ciribta fudfudud ee NEO-steel
TPU nadiifiso waxqabadka sare
Fidinta guud ee Scandinavian-ka
Saliida, aashitada iyo shidaalka u adkaysata shidaalka
Kuleyl u adkaysta ilaa 150 ° C (kaydinta)
HELI AIRTOX DUKAANKA
Alaabada kale ee taxanahan
AIRTOX Kabaha badbaadada TX1 TransAm
AIRTOX Kabaha badbaadada TX2 TransAm
AIRTOX Kabaha badbaadada TX3 TransAm
AIRTOX Kabaha badbaadada TX11 TransAm
AIRTOX Kabaha badbaadada TX22 TransAm
AIRTOX Kabaha badbaadada TX44 TransAm
AIRTOX Kabaha badbaadada TR55 TransAm
AIRTOX Kabaha badbaadada TX66 TransAm
AIRTOX® - kabaha nabadgelyada ee deenishka ee xambaarsan tikniyoolajiyadda berrito. Bixinta raaxo sarre iyo iftiin aan la arki karin suuqa xirfadleyda. Annaga oo ah shirkad soo saarta kabaha deenishka ee hal-abuurka leh, kuma liidanayno!
SAXIIX si aad u hesho warside
Hubso inaad na raacdo!